Inona no mahatonga ny Destination Samoa ho tsara tarehy ho an'ny mpitsidika?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Inona no mahatonga ny Destination Samoa ho tsara tarehy ho an'ny mpitsidika?
Aogositra 28, 2018
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fotoana laninao amin'ny fitaovana elektronika sy ny fitadiavana tsy tapaka ny tena ao amin'ny Internet sy ny tambajotra sosialy, dia maro ny mpitsangatsangana mitady toerana itodiana mba hihemotra lavitra amin'ireo teknolojia maoderina.
Ho an'ireo mitady handray détoxo, Beautiful Samoa dia toerana idyllic izay manana fahefana hanala anao tanteraka amin'ny tontolon'ny nomerika.
Eo afovoan'ny Pasifika atsimo eo anelanelan'i Nouvelle Zélande sy Hawaii, Samoa dia fantatra amin'ny maha-nosy sarobidy ao Pasifika atsimo - ny tena foin'i Polinezia. Ny hatsaran-tarehiny voajanahary dia mandray ireo mpitsidika amin'ny rano manga turquoise, lanitra madio ary morontsiraka fotsy madio.
Eto ianao dia afaka miala sasatra eny amin'ny morontsirak'i Lalomanu, antsoina hoe iray amin'ireo morontsiraka folo tsara tarehy indrindra eto an-tany; ny toerana tonga lafatra hiverenana amin'ny fotony, hamono ny masoandro na hijerena ny lanitra feno kintana miaraka amin'ny 'fahitana mahatalanjona ny Oseana Pasifika sy ireo tendrombohitra mahafinaritra any Upolu. Mandritra ny fialan-tsasatra tanteraka amin'ny hussle sy bussle amin'ny fiainana maoderina, eto dia afaka misafidy trano honenana amoron-dranomasina nentim-paharazana ireo mpitsidika ary mandany ny alina amin'ny iray amin'ireo moron-dranomasin'i Samoa. Ny fijanonana mandritra ny alina ao amin'ireo trano bongo eo an-toerana ireo dia manome traikefa tsy manam-paharoa hatory ao ambanin'ny kintana ary hizara ny fiainan'ny mponina eo an-toerana.
Miaraka amin'ny mari-pana 30 degre mandritra ny taona ny salan'isa rehetra, ireo nosy roa lehibe any Samoa dia manolotra fotoana betsaka hifandraisana amin'ny natiora ihany koa. Discover To Lavan'ny Ranomasimbe Sua, lava-bato 30 metatra feno rano ranomasina, miparitaka any Papaseea Sliding Rocks (solika amin'ny rano voajanahary) ao Upolu; very any amin'ny tropikaly ianao Faritra Reserve Rainforupo Rainforest na talanjona amin'ilay mahavariana Alofaaga Blowholes amin'ny Savai'i.
Toerana fialantsasatra ho an'ny fialantsasatra tonga lafatra, Samoa dia mifantoka amin'ny zava-dehibe indrindra: ny olony sy ny fomba fiaina 3,000 XNUMX taona - Fa'a Samoa - torolàlana ho an'ny Samoa tsirairay amin'ny fomba hitondrana ny fiainany amin'ny fankalazana sy fanekena ireo soatoavina nentim-paharazana, ny kolontsaina sy tontolo iainana.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitsidihana an'i Samoa www.samoa.travel.